မြားများ: ဝေးဝေးက လှမ်းကြည့်နေလိုက်မိတဲ့ ငါ့တိုင်းပြည် (မြင့်သန်း)
ဝေးဝေးက လှမ်းကြည့်နေလိုက်မိတဲ့ ငါ့တိုင်းပြည် (မြင့်သန်း)
ဟနွိုင်းမြို့ကိုရောက်ရင် မြို့လယ်က ဟုန်ကရမ်ကန်ကြီးနံဘေးက ပျော်ပွဲစားရုံကလေးတစ်ခုဆီမှာ ကျွန်တော်တို့ဆုံကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆိုတာက ကျွန်တော်နဲ့ အဲဒီက မိတ်ဆွေတွေ။အရင်ကတော့ မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းဆီက ရေကန်ကြီးအနားမှာနေတယ်။အဲဒီဖက်ကတော့၊ သံတမန်တွေ၊ အစိုးရရုံးတွေ ရှိတော့ ရပ်ကွက်အနေနဲ့ ပိုသန့်တယ်။ သန့်အောင်ကြိုးစားလုပ်ပြထားတယ်လို့ ခေါ်ရမလား။ ဒါပေတဲ့ အဲဒီဖက်ဆီက ဗီယက်နမ်ဖြစ်ခြင်း၊ Vietnamese ဆိုတာကို ပိုပြီးခံစားရတယ်။ ဗီယက်နမ်မှာ ဟနွိုင်းမြို့နဲ့ ဟိုချီမင်းမြို့(အရင်က ဆိုင်ဂုံလို့ခေါ်တဲ့မြို့)တောင် မတူဘူး။ ဟိုချီမင်းမြို့က အမေရိကန်တွေ လက်အောက်က လွတ်မြောက်လာတာ။ ခုချိန်ထိ၊ အမေရိကန်တွေရဲ့ ချွေးနံ့သေးနံ့တွေနဲ့အတူ လောက်တက်စပြုနေတဲ့ သူတို့ရဲ့ အနံ့ပေါင်းစုံကို ရနေနိုင်သေးတယ်။ အမေရိကန်ကို အဖေခေါ်ချင်သူတွေ အပုံကြီးရှိသေးတယ်။ မြို့အနေနဲ့ဟန်လုပ်ယဉ်ကျေးမှုအပုံကြီးပဲ။ ဗီယက်နမ်ဖြစ်ခြင်းဟာ အရိပ်အယောင်လောက်ပဲ။ ခုနေတော့ မြန်မာပြည်နဲ့ ယှဉ်ပြောရင် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနဲ့ နေပြည်တော်လိုပဲ။ နေပြည်တော်မှာ ပေါ်လစ်တင်ထားတဲ့ ဟန်လုပ်ယဉ်ကျေးမှုများသတဲ့။ မြန်မာဖြစ်ခြင်းဆိုတာ လေထဲမှာ ရှူကြည့်ရင် ရနိုင်တယ်ဆိုရုံလောက်ပဲ။ ဘယ်သူကမျှ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဘူးတဲ့။ အဲဒီက ပြန်လာတဲ့ လူမျိုးခြားပညာရှင်တစ်ဦးက ကောက်ချက်ချဖူးတယ်။ ဟုတ်လောက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အတုလုပ်ယဉ်ကျေးမှုဟာ အရင်းခံယဉ်ကျေးမှုရဲ့ရှေ့မှာ။ ရင်ဘတ်ကော့နေနိုင်တဲ့ အနေအထားဆိုတာတော့ ကျွန်တော်လည်း သတိထားမိခဲ့တယ်။ မော်ဒယ်လင်းယဉ်ကျေးမှု၊ ထွန်းကားနေတာသာကြည့်။ စံပြမယ်၊ ဟန်ပြမယ်၊ လှန်ပြမယ်ကို အတုယူနေကြရတယ်။ အနှစ်ရှိစရာမလိုဘူး။ သူတို့ကို တုပြီး စံပယ်ပန်းပန်ပြရုံ၊ ပဝါစုံချရုံနဲ့ မြန်မာဖြစ်ခြင်းဟာ အထောက်အထားဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။ နားထောင်တတ်ရင် လေထဲမှာ ကိုယ်ကျိုးကြည့်ဝါဒရဲ့ တောက်လောင်နေသံကို ကျယ်ကျယ်ကြီးကြားနေရနိုင်တယ်။ စံပြမယ်၊ ဟန်ပြမယ်၊ လှန်ပြမယ်ယဉ်ကျေးမှုဟာ တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်အဖြစ် ထွန်းကားနေတဲ့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားပဓါနအခြေပြု ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အတူတူပဲ။ ဒီအပိုင်းတော့ ဒီအနားဆီပဲ ထားခဲ့ပါရစေ။
နောက်ပိုင်းတော့ အလုပ်ပြီးတာနဲ့ကန်ကြီးအနားဆီပြောင်းတော့တာပဲ။ အဲဒီကမိတ်ဆွေကို ကန်ကြီးနားက စိတ်ချရတဲ့ ဟော်တယ်လေးတစ်ခုခု ရှာပေးစမ်းပါလို့ ပြောလိုက်မိတယ်။ အဓိကကတော့ ကန်ကြီးနဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့နေရာ၊ လျှောက်သွားလို့ သိပ်မလှမ်းတဲ့ နေရာ။ ဒါပေမယ့် မိတ်ဆွေတွေက တစ်မျိုးတွေးပုံရတယ်။ ဟိုတယ်ကလေးတစ်ခုရဲ့ အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ ငှားတယ်။ နေရာလိုက်ချရင်း လုံခြုံရေးအရာရှိက သော့အပိုတစ်ခုပေးပြီး အရေးအကြောင်းရှိရင် စကြံလမ်းတစ်နေရာမှာ ပန်းချီကားကြီးနဲ့ ဖုံးထားတဲ့ အရေးပေါ်ဓာတ်လှေကားကို သုံးဖို့တဲ့။ အောက်ထပ်က နောက်ဖေးလမ်းကြားထွက်ပေါက်ကို တန်းရောက်တယ်တဲ့။ ဒီတော့၊ ဘယ်လို အရေးအကြောင်းမျိုးရှိရင်လဲ။ အမေရိကန်က ဗုံးလာကြဲဦးမှာလား၊ လို့ မေးကြည့်လိုက်မိတယ်။ တစ်ယောက်က ပြန်ပြောတယ်။ မပြောတတ်ဘူး။ အမေရိကန်က နိုင်ငံတော်ရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ထင်ရာလိုက်ပြီး ဗုံးကျဲနေတာ။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အန္တရာယ်ကင်းအောင်လို့ ပါကစ္စတန်မှာ ဒရုန်း Drone နဲ့ လိုက်ပစ်နေတာသာကြည့်လို့၊ ပြောရင်းရယ်တယ်။ မင်းက၊ စိတ်ချရတဲ့ဟော်တယ်လို့ ပြောလို့ပါလို့ တစ်ယောက်က ဖြည့်ပြောတယ်။ စိတ်ချရတဲ့…လို့ ပြောတာက ပြောရိုးပြောစဉ်ပါ။ ဗီယက်နမ်က စိတ်ချရပါတယ်။ ငါ့ကို အမြင်ကတ်နေတဲ့ ငါ့အမျိုးတွေ မြန်မာစာရေးဆရာတွေလည်း ရှိမှမရှိဘဲ။ ဒီတော့၊ ငါ့ကို ချောင်းရိုက်မယ့်လူ ရှိပုံမပေါ်ဘူးလို့ ပြောရင်း ရယ်ကြရတယ်။ အဲဒီနောက်တော့၊ အဲဒီဟော်တယ်ကလေးဟာ ဟနွိုင်းရောက်တိုင်း နေစရာအခန်းကလေး ပဲ။
အဲဒီကိုရောက်တဲ့အခါ ငါတော့ဖြင့် ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်က စပြီး အားပြီဟေ့လို့ တောင်ဖက်က ဒလတ်မြို့မှာနေတဲ့ ဗာန်းကိုသာ အကြောင်းကြားလိုက်၊ ဟနွိုင်းဆီကို သူက ဆင်းလာရော။ တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်း သူကပဲ အကြောင်းကြားလိုက်တယ်။ ညနေ ငါးနာရီလောက် ပျော်ပွဲစားရုံကလေးရဲ့ အပေါ်ထက်ကိုသာ တက်သွား။ ကျွန်တော်တို့ စားပွဲက အဆင်သင့်။ များသောအားဖြင့် ဗာန်းက ရောက်နှင့်နေတတ်တယ်။ ဟနွိုင်းကိုသူလာတာ၊ ဘာကိစ္စမျှမရှိဘူး။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ လာပြီးလေပစ်ဖို့ပဲ။ ဒီတော့လည်း သူက အမြဲလိုစောတယ်။ သူက ပြောလေ့ရှိတယ်။ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ကိုယ်နဲ့အမြီးအမောက်တည့်အောင် စကားပြောမယ့်လူလိုတယ် တဲ့။ ဒီစကားကိုဖြင့်ကျွန်တော့်ဒကာမကြီးအတော်သဘောကျတယ်။ သူက ဗာန်းကိုပြောတယ်။ ရှင်ပြောတာကို ကျွန်မ မငြင်းပါဘူး။ ဒါပေတဲ့၊ ကျွန်မယောက်ျားကတော့ ပြောစရာလူမရှိလည်း ရောက်ရာအရပ်မှာ သူနဲ့ ပြောလို့ဖြစ်မယ့် လူကိုတော့ တွေ့အောင်ရှာတတ်တယ်တဲ့။ ဒါဟာ ခင်ဗျားယောက်ျားရဲ့ တရားဝင်ဖော်ထုတ်မထားတဲ့ ဂုဏ်ရည်တစ်ခုပဲမဟုတ်လားလို့ ဗာန်းက ပြန်ပြောတယ်။ ဒကာမကြီးလည်း မပြောသာတော့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ လူသိုက်ကို Birds ofafeather လို့ပဲ ခေါ်တော့တယ်။ တစ်ခါတလေတော့ အပျင်းပြေအောင်သဘောမျိုးနဲ့ သူကိုယ်တိုင်လိုက်နားထောင်ရင်း ညစာစားတယ်။ စားပြီးရင်တော့၊ ကျွန်မတော့ ဒီ့ထက်ပိုပြီး နားမထောင်နိုင်တော့လို့ ဂုဏ်ရည်တူလူကြီးမင်းများက ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့ အသာရိရင်း ထပြန်ရော။ ဒီတော့လည်း အားလုံးက ထိုင်ရာက ထပြီး လက်ခုပ်တီးရင်း ရယ်ကြရတယ်။
ဗာန်းက စာ ကဗျာကြိုက်တယ်။ (သူ့အကြောင်းလေးကို ကဗျာလောက ၃ မှာ နည်းနည်းရေးခဲ့ဖူးတယ်။ နည်းနည်း ထပ်ရေးပါရစေ။) သူက၊ ငယ်ငယ်က ကဗျာဆရာဖြစ်ချင်တာ.။ သူ့အဖေက ကဗျာဆရာဆိုတာ ဘာမျှရေရေရာရာမရှိတဲ့ လူမျိုးမို့၊ သူ့ကို စစ်ထဲသွင်းလိုက်တယ်။သူ့စကားအတိုင်းပြောရရင်တော့၊ ငါလည်း စစ်ထဲမှာ ရေရေရာရာမရှိဘဲ အတော်ကြာသွားလိုက်တာ၊ ဗိုလ်မှူးကြီးကို ဖြစ်ကရောတဲ့။ ခုတော့၊ ပင်စင်စား။ တောင်ဖက်ဆီက ဥတုရာသီကောင်းတဲ့ ဒလတ်မြို့မှာ သွားနေတယ်။ သူ့ကို ကဗျာရေးဖို့ ကျွန်တော်က မြှောက်ပေးတယ်။ ခုတော့ သူများရေးတာကိုပဲ အချိန်ပေးဖတ်ရတာ အရသာရှိနေသတဲ့။ မင်းက ငါ့ကို ဘာလို့ ကဗျာရေးခိုင်းတာတုန်းလို့ ပြန်မေးတယ်။ဒီတော့ ကျွန်တော့်အမြင် ရှင်းပြရပြန်တယ်။ တို့ဆီမှာတော့ စစ်ဗိုလ်ကြီးတွေ အနားယူသွားရင် ဘာလုပ်လုပ်တင့်တယ်တယ်။ သူတော်စင်တွေဖြစ်သွားကြတယ်။ စာရေးဆရာလွယ်လွယ်ဖြစ်တယ်။ ကဗျာရေး စာရေးရင် လွယ်လွယ်ဆုရတယ်။စာပေဆုမှာ ကဗျာဆုတွေဘာတွေပေးရင်၊ ရေးတဲ့လူက တပ်ထွက်လားဆိုတာ အရင်ကြည့်သတဲ့။ တပ်ထွက်ဆိုရင် ကဗျာဆုရဖို့ လွယ်သတဲ့၊ လို့ ဖြေတော့၊ ဗာန်းက ဒီလိုဖြင့် အာဆီယံနိုင်ငံအချင်းချင်းမို့ မင်းတို့ဆီကို ပြောင်းမယ်ကွာလို့ ပြန်ပြီးနောက်တယ်။ အဲဒီပျော်ပွဲစားရုံကလေးရဲ့ ပိုင်ရှင်ကိုလည်း ဗာန်းက ပိုင်ပုံရတယ်။ ဒီတော့ ကြိုက်တာချက်ခိုင်းလို့ရတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကြောင့်ပဲ စာ ကဗျာအပေါ်ငြိတဲ့ ပညာတတ်အတော်များများနဲ့ တွေ့လာသိလာရတယ်။ တက္ကသိုလ်က ဆရာဗာန်း(သူ့ကိုတော့ ကျွန်တော်က ဗာန်းချင်းကွဲအောင် ဗာန်းတူးလို့ ခေါ်တယ်။)ကတော့ စာ ကဗျာအတော်ပိုင်တယ်။ စာကဗျာကို ငြိရုံ ငြိတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ထိလည်း ထိတယ်။ တွယ်လည်း တွယ်တယ်ဆိုတဲ့ လူမျိုး။ ကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းက လူတွေကတော့ စာပေသည် ပြည်သူ့အတွက် ဆိုတာကို သဘောမတူကြတဲ့လူတွေ။ ပြည်သူ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းက လိုအပ်တာထက်ပိုပြီး လက်ခံထားတဲ့ အသုံးအနှုန်း (ဟိုစဉ်က -ခု အမေရိက မှာနေတဲ့- ကဗျာဆရာ မောင်စွမ်းရည်တို့ မျက်စေ့စုံမှတ်ပြီး လက်သီးလက်မောင်းတန်းအော်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူ ဆိုတာမျိုး။) စာပေအပါအဝင် အနုသုခုမပညာတွေဟာ အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းမှာပဲ တည်တယ်။ နက်လာလေ ပရိဝုဏ်က ကျဉ်းမြောင်းလာလေပဲ။ ပြည်သူအများစု လိုချင်တာက ဖြေဖျော်ရေး။ ဥပမာ- မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လူများများကြိုက်လို့ ဒါမှမဟုတ် စာပေဆုပေးဖို့ ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့ ခပ်တုံးတုံးလူတွေ(အများစု) သဘောကျတဲ့ ကဗျာတွေဟာ ဖြေဖျော်ရေး ကဗျာတွေ။ ဖြေဖျော်ရေးကဗျာဆိုတာက ကဗျာဖန်တီးသူဟာ သူ့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝထဲ ဖန်တီးဖြစ်လာအောင် ရည်ရွယ်ပြီးရေးတဲ့ ကဗျာမျိုး။ ပြည်သူအတွက်ဆိုတဲ့ ဖြေဖျော်ရေး ကဗျာမျိုးတွေကို ကျွန်တော်တို့ ထည့်မဆွေးနွေးကြဘူး။
တစ်နေ့ညနေတော့ ကျောင်းဆရာဗာန်းက ဟောင် လို့ ခေါ်တဲ့၊ သူ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ခေါ်လာတယ်။ ဗီယက်နမ်လူမျိုးပေတဲ့ နယ်သာလန်နိုင်ငံမှာနေတဲ့လူ။ ကျောင်းဆရာ ဗာန်းနဲ့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ခင်တာ။ ၇၀ ခုနှစ်ကာလထဲမှာ မိဖနဲ့အတူ ပင်လယ်ထဲကနေ လှေသင်္ဘောနဲ့ ဘယ်ရောက်ရောက်ဆိုပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားကို ရောက်ပြီး နောက်ဆုံးတော့ နယ်သာလန်နိုင်ငံကနေဒုက္ခသည်အဖြစ် လက်ခံလိုက်လို့ နယ်သာလန်နိုင်ငံရောက်သွားကြတဲာ။ ခုတော့ သူက အီလက်ထရွန်းနစ်အင်ဂျင်နီယာ။ နှစ်စဉ်ဆိုသလို ဟနွိုင်းကို ပြန်လည်သတဲ့။ မိဘနဲ့အတူ ပထမတစ်ကြိမ်ဗီယက်နမ်ကို အလည်ပြန်ပြီးကတည်းက ခုဆို နှစ်စဉ်အလည်ပြန်တာ။ တစ်ခါတလေ ခွင့်ရက်ရှည်ရရင် ဟနွိုင်မှာ လချင့်အောင် နေသတဲ့။ သူကလည်း စာကဗျာ အတော်အထုံပါပုံရတယ်။ အဲဒီညနေဘက်တော့ ကျွန်တော်တို့ ကဗျာအကြောင်းနဲ့ မစဖြင်ဘူး။ အရှေ့တောင်အာရှက လူတွေ ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေကို စွန့်ခဲ့တဲ့ အကြောင်း ပြောဖြစ်သွားကြတယ်။ ဟောင်ကတော့ သူ့မိဘရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် သူတို့ တစ်ရပ်တစ်ကျေးကို သွားခဲ့ရတာဖြစ်လို့ ဘာရည်ရွယ်ချက်မှမရှိဘဲ ရေခြားမြေခြားနေတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲလို့ သူ့ကိုယ်သူ မြင်သတဲ့။ ကျွန်တော်လည်း ဒီလိုပဲ နားလည်တယ်။ မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာ ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းမှာပဲ တည်တယ်။ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်နဲ့ မတူဘူး။ နော်မန်ဗက်သရွန်းပြောခဲ့တဲ့ Internationalism, not nationalism ဆိုတာပဲ။ နောက်တော့ ကျွန်တော့်ကို မေးကြတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ် ဆိုရမှာပဲ။ ကျွန်တော် သိချင်တာ တတ်ချင်တာ၊ ဖတ်ချင်တာတွေ မရတော့တဲ့အတွက် ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ရေကို စွန့်ရတာပဲ။ကျွန်တော်က ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်မှာ ကြီးပြင်းရတာ။ ဆိုရှယ်လစ်ကို လိုလားပေတဲ့ ဆိုရှယ်လစ်က ကိုယ့်ကို မလိုလားတဲ့ ဆိုရှယ်လစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်။ အဆိုးရွားဆုံးက တက္ကသိုလ်မှာ ဆိုရှယ်လစ်အကြောင်း လာသင်တဲ့ ဆရာဆိုတာတွေနဲ့ တိုးလာရတာပဲ။ သူတို့က တွဲဖက်ကျောင်းရောက်လာတဲ့ ဆွဲခန့်ဆရာတွေလောက်မျှ မတော်တဲ့ မတတ်တဲ့ လူတွေ။ဆိုရှယ်လစ်ဆိုတာမှာ Prefix ထည်လို့ဖြစ်သလားဆိုတာကို ပြန်မဖြေတတ်လို့၊ ဒါဟာ နိုင်ငံတော်ကို စော်ကားမှုဖြစ်နိုင်တယ် လို့၊ ခြိမ်းခြောက်တဲ့ ဆရာမျိုးတွေ။(အဲဒီထဲမှာ - မကြာခင်က ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ဆရာဦးခင်မောင်အေး(တက္ကသိုလ် ခင်မောင်အေး) မပါဘူး။ ) ဒီဆရာတွေ သင်တာ နားထောင်ရင်း၊ သူတို့ ပြောနေတဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ဆိုတာက တို့နားလည်တဲ့ ဆိုရှယ်လစ် မဟုတ်ပါလားလို့ သိလာရတာ။ စိတ်ပျက်လာရတာ။ ပိုဆိုးလာတာက၊ ဥက္ကဋ္ဌကြီးက တောပြန်ရဲဘော်ရဲဘက်ဟောင်းတွေကို လိုအပ်တာထက် ပိုပြီးအကြံဥာဏ်ယူလာတဲ့အချိန်။ တိုင်းပြည်ကတော့ ဆိုရှယ်လစ်တိုင်းပြည်ဖြစ်မဖြစ်တော့ မသိဘူး။ တောပြန်တွေ ဆိုင်ခန်းကောင်းကောင်းတွေ ရပြီး၊ အရင်းရှင်ဖြစ်သွားကြတော့တာပဲ။ (ဆူးလေဘုရားလမ်းပေါ်က နေပြည်တော်ရုပ်ရှင်ရုံအောက်မှာ တောပြန်တွေ ဆိုင်ခန်းရပြီး ထောကုန်တာ သက်သေပဲ။) တကယ်တော့ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကြီးဟာ မြန်မာဆိုတဲ့ Prefix ထည့်ပြီး နာမည်ဖျက်ခံလိုက်ရတော့တာပဲ။ ဒီတော့ မာ့(စ)ဝါဒက ကြားထဲကနေ သိက္ခာကျရတယ်။ ဒါလည်း ကျမ်းရင်းမဖတ်ဘဲ၊ အိန္ဒိယကထုတ်တဲ့ မာ့(စ)ဝါဒ စာအုပ်လောက်ဖတ်ပြီး တောရမ်းမယ်ဖွဲ့ လုပ်လိုက်ကြုလို့ပဲ။ *
( * အကြောင်းသင့်လို့ နည်းနည်း ရေးချင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ ကျွန်တော့်အထင်သက်သက်မဟုတ်ပါ။ ဟိုတုန်းက ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ကွန်မြူနစ်ဝါဒဆိုင်ရာအရေးအသားတွေမှာ အိန္ဒိယပြည်က အရေးအသားတွေရဲ့ ဟန်၊ အမြင်တွေ အများကြီးပါနေတာ တွေ့ရလို့ပါ။ အဖေနဲ့ လာပြီး စကားပြောလေ့ရှိတဲ့ (အန်ကယ်) ဦးသိန်းဖေမြင့်ကို တစ်ခါက မေးကြည့်ဖူးတယ်။ ဟိုစဉ်ကတော့ ကုလားပြည်က လာတဲ့ စာအုပ်စာတန်းတွေကိုပဲ အားကိုးခဲ့ရပြီး မာ့(စ)ဝါဒကို လိုသလောက်ပဲ ယူခဲ့ကြရတယ်။ မပြည့်စုံဘူးဆိုရင်တော့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ နောက်ပိုင်း ( ဆိုလိုတာက လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့ ကာလ)မှာ၊ ဘာဖြစ်လို့ မဖြည့်သလဲ ဆိုတော့၊ (အန်ကယ်)ဦးသိန်းဖေမြင့်က ရယ်တယ်။ ဘယ်သူမျှ စိတ်မပါကြတော့လို့ ဖြစ်မယ်၊ တဲ့။ ဒီ့ပြင် အဖေနဲ့ အလွန်ခင်ကြတဲ့ သခင်ချစ်မောင်(မြန်အောင်)၊ (ဘာဆာဦးတင်လို့လည်း သိကြတဲ့) မြန်အောင်ဦးတင်၊ ဦးစောဦး (ပေါ်လစီဒါရိုက်တာ) စတဲ့ လူကြီးတွေကိုလည်း မေးကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်မှာ ဦးခင်မောင်ရှိန်(မြန်မာ့အသံ)ရဲ့ အိမ်မှာ ဦးခင်မောင်ရှိန်နဲ့ ဦးခင်မောင်အေးကို မေးကြည့်တော့လည်း ဒီသဘောမျိုးပဲ အဖြေရတယ်။ တကယ်တော့ ဒီအကြောင်းဟာ အတော့်ကို စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်။ သမိုင်းပညာလို့ ဘာသာရပ်ကို ပညာရပ်တစ်ခုအဖြစ်လေ့လာနေတဲ့ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသူကျောင်းသာ မျိူးတွေဟာ အချိန်ပေးပြီး သုတေသနလုပ်ပြီး ကျမ်းရေးဖို့ ကောင်းတယ်။ Guide/Supervisor ကောင်းကောင်းတော့ လိုမယ်။ဖေတော့ မောင်တော့ သမိုင်းရှင်းတမ်းဆိုတာမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး။……………………………….)
နောက်တော့ ဟောင်က မေးတယ်။ ခင်ဗျားရော ခင်ဗျားတိုင်းပြည်ကို အလည်ပြန်သလား။ တဲ့။ အလည်ရယ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ လမ်းကြုံတဲ့အခါ နှစ်ရက်စ သုံးရက်စ ဝင်တတ်တယ်လို့ ကျွန်တော်က ဖြေလိုက်တယ်။ ခင်ဗျားတို့ တိုင်းပြည်ကို ခင်ဗျားအနေနဲ့ အပြင်ကနေကြည့်တော့ ဘယ်လိုမြင်သလဲလို့ ဟောင်က ထပ်မေးတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ချက်ချင်းပြန်မဖြေသေးဘဲ၊ ခေါင်းခါလိုက်မိတယ်။ ဗာန်းက ကြားဖြတ်ပြီးဝင်ပြောတယ်။ သူက၊ အစကတည်းက ဒီမိုကရေစီဆိုတာကို မယုံကြည်တဲ့ လူတဲ့။ ဟောင်က အံ့သြသင့်သွားတယ်။ ပြီးတော့၊ သူ့သူငယ်ချင်းကျောင်းဆရာ ဗာန်းကိုကျောပုတ်လိုက်ရင်း၊ ငါမပြောဘူးလား။ တတိယကမ္ဘာက လူတွေသာ ဒီမိုကရေစီကို အထင်ကြီးကြတာ။ဒီမိုကရေစီဆိုတာ လိုရင်လိုသလို သုံးလို့ရတဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးကလွဲလို့ ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူး။ ဖြေဆေးတစ်ခုမဟုတ်ဘူးတဲ့။ ကျွန်တော်တောင် ဟောင့်စကားကို အံ့သြသင့်လိုက်မိတယ်။ ဒီလိုလို့၊ စကားခံပြီး ကျွန်တော်က ရှင်းပြလိုက်မိတယ်။ ဒီမိုကရေစီကိစ္စကို ခဏဖယ်ထား။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်က ငါ့တိုင်းပြည်ပြန်ရောက်တော့ အံ့သြစရာကောင်းတာ အများကြီးတွေ့လာရတယ်။ လူတိုင်းလိုလိုဟာ အကုန်သိ အကုန်တတ်တဲ့ အိပ်စပတ်တွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။ ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ….စတဲ့လူတွေအားလုံးဟာ၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ချန်ပီယံတွေချည်းပဲ။ ဒီကြားထဲ ဘုန်းကြီးတွေတောင်ပါသေးတယ်။ တိုင်းပြည်ကလူကြီးပိုင်းတွေရော၊ အတိုက်အခံဆိုတာကပါ ကမ္ဘာကြီးထဲ လျှောက်သွားပြီး မော့တော့မော့တော့ လုပ်ပြနေရတာ။ လူအထင်ကြီးခံရအောင် လုပ်နေတာကို သိပ်အရေးကြီးတယ်လို့ ထင်နေတာ။ အတိုက်အခံဆိုတာက အနောက်နိုင်ငံရဲ့ အားပေးမှုကို မျက်စေ့မှိတ်ယူထားပြီး ကိုယ်ကျိုးတစ်ခုလောက်ပဲ ကြည့်နေတော့တာ။ တိုင်းသူပြည်သားရဲ့ ဒုက္ခဟာ အရင်ကထက်တောင် ကြီးနေသေးတယ်။ ဒါပေတဲ့ ဘယ်သူကမှ အဖြေမရှာချင်ကြဘူး။ အရင်ကဆို၊ ပြောပြရင် နားထောင်မယ့်လူ ရှိသေးတယ်။ ခုတော့၊ လူတော်တွေချည်းဖြစ်နေတော့ ဘယ်သူ့ကို ဘာပြောမလဲ။ တိုင်းပြည်ရဲ့ အကျိုးစီးပွား ဆိုတဲ့ စကားလုံးတောင် အဓိပ္ပါယ်မသိတဲ့လူမျိုးက သမ္မတကို အကြံပေးရတယ်ဆိုကတည်းက ဘာပြောနေစရာလိုသေးလဲလို့ ကျွန်တော်က ရှင်းပြလိုက်မိတယ်။ အားလုံးက ဘာမျှဝင်မပြောဘူး။ ခေါင်းညိတ်လို့ပဲ နေကြတယ်။
နောက်တော့ ကျောင်းဆရာဗာန်းကို ဟောင်က ပြောတယ်။. မင်း၊ ငါ့ ကိုပြောတဲ့ ကဗျာ အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ထားတာရှိရင် သူ့ကိုလည်းကော်ပီတစ်ခု ပေးလိုက်စမ်းပါ၊ တဲ့။ ဒီတော့မှ၊ ဗာန်းလည်း သတိရသွားပုံရတယ်။ ငါ့မှာရှိတယ်။ သားကိုဖုန်းဆက်ပြီး ကော်ပီထုတ်ပြီး ဒီကိုလာပို့ခိုင်းလိုက်မယ်လို့ ပြန်ပြောတယ်။ နောက်တော့ အဲဒီကဗျာ၊ ကဗျာဆရာအကြောင်းစတာတွေ ဆက်ပြောဖြစ်ကြတယ်။ အဲဒီကဗျာရောက်လာတော့၊ စားရင်းသောက်ရင်း မြည်းကြည့်လိုက်မိတယ်။ သဘောကျလွန်းလို့၊ နောက်တစ်နေ့မှာ သူတို့တစ်တွေနဲ့ ထပ်ပြီးပြောဆိုကြတယ်။ သူတို့ဘာသာစကားအခြေခံပြီး နားလည်ပုံကို ကြားရတော့ ပိုလို့အဆင်ပြေသွားတယ်။ ကဗျာကို ရေးတာက ငုယင် ဒွိုင်း ဆိုတဲ့ ကဗျာဆရာ။ ၁၉၈၈ မေလမှာ မော်စကိုမှာ ရေးတာ။ ဗီယက်နမ်မှာတော့ ကဗျာနဲ့ နီးစပ်တဲ့လူ အတော်များများက အဲဒီကဗျာကို သိကြသတဲ့။ ဟုတ်လောက်တယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ ဘာမျှ ထပ်ပြောစရာမရှိဘူးလို့ ဆိုချင်တယ်။ ဖတ်ကြည့်ကြပါ။
ဝေးဝေးက လှမ်းကြည့်နေလိုက်မိတဲ့ ငါ့တိုင်းပြည်
အဖြူရောင် ဗလာစာရွက်လို ဖြစ်လာတယ်။
မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းက အဖြူရောင်ဖွေးဖွေးက ကြောက်စရာလို ပြောင်းလဲ
တစ်ယောက်ယောက်က ငါ့နောက်မှာ အသာဝပ်လို့ စိုက်ကြည့်နေသလို။
ကိုယ့်ကိုယ့်ကို စကားပြောပြီး ငါ့ပြည်ငါ့ရွာကို ကြည့်ရဲလောက်အောင် စိတ်အေးလာတယ်။
အဲဒီက တောင်တွေ၊ မြစ်တွေ
နဲ့၊ မြေကမ္ဘာပေါ်က အက်ကြောင်းတွေ။
ချစ်ခြင်း၊ နာကြည်းခြင်းတွေနဲ့ အတူ
ငါဟာ အလွမ်းဇာတ်ထဲက လူစွမ်းကောင်းလို လှိမ့်ပိမ့် ခံစားနေရင်း။
ငါဘယ်နေရာရောက်ရောက် ငါ့ပြည်ငါ့ရွာဟာ ငါ့ရင်ထဲအသည်းထဲမှာ။
နယ်နိမိတ်တွေဟာ ပျောက်ဆုံြးုခင်းကနေ ချစ်ခြင်းအထိ ဆန့်ထွက်လို့သွား။
အလင်းရောင်းက တောက်လွန်းတော့ ငါ့ မျက်စိတွေ အပူလွန်ဒဏ်ခံရ။
ငါ့နောက်နားဆီက တစ္ဆေတစ်ကောင်လို တစ်ယောက်ယောက် ဖျက်ခနဲ ပေါ်လာ
ဟဲလို ရှည်မြောမြော၊ အစွမ်းမရှိတဲ့ လူစွမ်းကောင်း
ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ လှဲအိပ်နေတဲ့ မည်းမည်းရှည်ရှည်ကြီးရယ့်။
အိုကေ။ ငါပဲ။ ငါ့ဆီပဲ ပြန်ရောက်လာတာ
သောက်ကျိုးနဲ၊ ငါ့အရိပ်နဲ့ စကားပြောနေမိလို့။
တစ်ခါတုန်းကတော့ ငါတို့ သံပြိုင်တေးကို ဝိုင်းလို့ဆို
ရင်ထဲအသည်းထဲက ခံစားချက်တွေနဲ့ ဆိုပုံက
‘ငါတို့ဟာ ငါတို့ပဲ။ ဒါပေတဲ့ တို့ဟာ ခံစားတတ်’ တဲ့ ၁ ။
(၁ဗီယက်နမ်စစ်ကာလတွင် ရေးသားသော ဗီယက်နမ်ကဗျာဆရာ ချီလန်ဗီယာန်၏ ကဗျာမှ စာကြောင်းဖြစ်သည်။)
ဟုတ်တာပေါ့။ တစ်ခါတုန်းက ရှိခဲ့တဲ့ ပြောစမှတ်ပြုစရာ ကာလကြီးတစ်ခု
ကြီးမားကျယ်ပြန်တဲ့ နာကြည်းစရာ၊ ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ သွေးမြေကျခဲ့ရတာ
သေခြင်းရဲ့ မျက်လုံးတွေ လင်းလက်တောက်ပပြီး ပွင့်လာပေတဲ့ ပြန်မပိတ်ချင်ကြတော့။
ဟုတ်တယ်။ အဲဒီတုန်းက တို့တစ်တွေဟာ ဘာကိုမျှ မငြင်းဆန်ခဲ့ကြဘူး။
အရာရာဟာ တဖက်တည်းကိုပဲ စီးမျောသွားရတယ်။ လိုက်ပါစီးမျောနိုင်မှုမရှိခြင်း၊ မရှိစေရ။
လွဲမှားတဲ့စံပြု လက်ခံကိုးကွယ်မှုတွေ၊ ပွက်နေတဲ့ ဆီအိုးထဲက ကြက်သွန်နီဥစိမ်းစိမ်းတွေလို့
အကြော်လွန်လို့ ပျက်ရတဲ့ အစာမို့ ငါ့ဗိုက်ထဲက၊ ရင်ထဲက မခံနိုင်ခဲ့။
အနာကြီးနာခဲ့ရတဲ့ စိတ်ထဲ ကိုယ်ထဲကဟာ ဖနောင့်က အကွဲလို
စစ်ကြီး ပြီးသွားပါပြီ။ ဒါပေတဲ့ ခုထိ ဖြစ်နေသေးသလိုပဲ။
ငါတို့တိုင်းပြည်ဟာ ချမ်းသာပါတယ်။ ဒီလိုဖြင့် အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့တွေ ဘာကြောင့်
အရိပ်မည်းကြီးကတော့ သူ့ရင်ဘတ်ကို သူ့ဘာသာ လက်သီးနဲ့ထု လို့။
ဒါပေတဲ့၊ ဒုက္ခိတ စစ်သည်တွေအများကြီးဟာ ဘာ့ကြောင့် မတော်မတရား
ရွာကလမ်းတွေဟာ ချိုင်းထောက်ရာတွေကြောင့် ကျောက်ပေါက်မှတ်တွေကို ဖြစ်လို့။
သေသွားကြတဲ့ ဂုဏ်ပြုခံတွေရဲ့ အမေတွေက သူတို့သားကို ပြောကြတယ်
ခေါင်းမရှိတဲ့ တစ္ဆေတွေကို စွဲချက်တင်ဖို့၊ အာဏာရှိသူတွေရဲ့ အိမ်ဝန်းကျင်မှာ ချုံခိုတိုက်ပွဲ ဆင်ကြဖို့
နင်တို့ဂူ နင်တို့ဖွင့်၊ နင်တို့အလောင်း နင်တို့ ထုတ်ယူခဲ့ကြ၊ တဲ့။
အရပ်မည်းကြီးက အားမရှိလူတဲ့ သူ့လက်တွေကို ဆန့်ထုတ်လို့။
ရက်ရောမှု ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်ပါ။ ဒါပေတဲ့၊ တစ္ဆေတွေ ဘာကြောင့် များလွန်းနေရတာလဲ။
မကောင်းဆိုးရွားတွေ၊ ဇိမ်ခေါင်းတွေ၊ ပုလိပ်တွေ - တိတ်တိတ်ပုန်းအကြံသမားတွေရဲ့။။။။
ပိန်ညှော်ညှော်အရိပ်တွေနဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့ အရိပ်အရောင်တွေများလား။
ခေါင်းနောက်ဖက်က ဆံပင်မွှေးတွေတောင် ထောင်လာသလိုပဲ။ အသည်းနှလုံးကတော့ ဗလာ။
တောက်ပနေတဲ့ ကြေကွဲစရာ စကားလုံးတွေနဲ့ အတူ။
အရိပ်မည်းကြီးကတော့ ကောင်းကင်ကို ကြည့်၊ လို့။
သက်ဝင်ယုံကြည်မှုနဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆန်းပေါတဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ခုပါ။
ဒါပေတဲ့၊ ဘုရားကျောင်းတွေ၊ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာ နေရာတွေဟာ ဘာကြောင့်
စီးပွားရေးလုပ်သန်းကြီးတွေရဲ့ ကုန်လှောင်ရုံတွေ ဖြစ်သွားကြရတာလဲ။
ထာဝရဘုရားသခင်ကိုတောင် နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ဖို့ အစီအစဉ်တွေ လုပ်ကြတာပဲ။။
စက္ကူကတော့ ပြဲပြီ၊ ဒါပေတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားကိုတော့ သိမ်းမထားဘူး ၂...။
(၂ ဗီယက်နမ်လူမျိုးတို့၏ ဆိုရိုးစကားဖြစ်သော - စက္ကူပြဲသွားပေတဲ့၊ လူတွေက နှုတ်ခမ်းသားကလေးကို သိမ်းထားကြသေးတယ်။ - ကို ဆန့်ကျင်ရေးသားထားခြင့်ဖြစ်သည်။.)
ဗုဒ္ဓရုပ်တုတွေ ငို၊ လို့။ ယုံကြည်မှု ဆိုတာတွေက ပျောက်။
ကောင်းခြင်းနဲ့ ဆိုးခြင်းဆိုတာ ခွဲမရတော့ဘူး။
အရိပ်မည်းကြီးက ထိုင်ရင်းတွေး၊ လို့။
ဒါပေတဲ့၊ စာမတတ်တဲ့ကလေးတွေ ဘာကြောင့် များနေရတာလဲ။
စာသင်ကျောင်းတွေကကော ဘာကြောင့် စုတ်ပြတ်နေရတာလဲ။
ကလေးဘဝဟာ ချွေးနဲ့ မျက်ရည်တွေအောက်မှာ လက်လျှော့ခဲ့ရ။
ကလေးဘဝဟာ ခါးကွေးလောက်အောင် ရုန်းကန်ခဲ့ရ။
ကလေးဘဝရဲ့ ကံကြမ္မာဟာ လမ်းပေါ်က သစ်ရွက်တွေလို၊ လွင့်ခဲ့ရ။
ငါတို့ရဲ့ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ကလေးတွေကို လူတွေက တွေ့တိုင်း အကန်း ဆိတ်ဖမ်း၃ ဆိုသလို။
(၃ဗီယက်နမ်ကလေးများ ကစားလေးရှိသော ကစားနည်း။ မြန်မာကလေးများကစားသော ရွှေစွန်ညို ဆန်ဆန်။)
ဒါပေတဲ့၊ သူတို့ရဲ့ မျက်လုံးတွေကို ဖွင့်ပေးလိုက်တော့……အရည်အသွေးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့
အရိပ်ကလေးတွေဟာ အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့။
အရိပ်မည်းကြီးကတော့ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ခေါင်းကို ညွတ်၊ လို့။
ဒါပေတဲ့ ပြည့်တန်ဆာတွေ ဘာကြောင့် များနေရတာလဲ။
အိမ်ကြီးရခိုင်ထဲက ပြည့်တန်ဆာ၊ သူခိုးဈေးထဲက ပြည့်တန်ဆာ၊ လယ်ထဲယာထဲက ပြည့်တန်ဆာ…
အောက်တန်းစားကတော့ ပါးစပ်ကို ဖြည့်ကို ယောနိကိုရောင်း
အထက်တန်းစားကတော့ ယောနိကိုဖြည့်ဖို့ ပါးစပ်နဲ့ ရောင်း
စိတ်ဓာတ်ရဲ့ တန်ဖိုးက ကျသွားရော..။
အရိပ်မည်းကြီးက သူ့နားရွက်ကို သူ့ဘာသာ ကုတ်၊ လို့။
ဒါပေတဲ့၊ အပျင်းတွေ ဘာကြောင့် များနေရတာလဲ။
ကျွမ်းကျင်နေတဲ့ လူတွေက အလုပ်မလုပ်ချင်ကြဘူး။
အချိန်တန် လခရနေသယောင် ပြောကြတယ်။
အလုပ် လုပ်သယောင် ပြောကြတယ်။
သူတို့ ကျူးလွန်တဲ့ ပြစ်မှုကို ဂရုမစိုက်ဘူး
သူများတွေ ကျူးလွန်နေတဲ့ ပြစ်မှုတွေကိုလည်း ဂရုမစိုက်ကြဘူး။
တရားမဝင် လုပ်ကိုင်စားတယ်ဆိုတာ လမ်းပေါ်မှာ စီတန်းလှည့်လည်၊ လို့။
သူတော်စင်တွေနဲ့ အလုပ်တွေ အပါအဝင်၊ ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားနေတာက အလုံးစုံ။
တရားရုံးတွေဆီမှာက အလုပ်အကိုင်တွေ ရောင်းချနေလေရယ့်။
အရိပ်မည်းကြီးက ပခုံးတွန့်ပြ၊ လို့။
ဒါပေတဲ့ လူတွေ အများကြီး ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာကို ဘာကြောင့် စွန့်ကြရတာလဲ။
သွားတော့မယ်လို့ နှုတ်ဆက်တာ အများကြီး၊ ဒါပေတဲ့၊ ပြုံး၊ လို့။
မုဆိုးမတွေကို ဂရုမစိုက်ကြတော့သလို၊ သူတို့ လယ်ကွင်းတွေ မသိကျိုးကျွန်ပြု၊
တစ်ပြည်တစ်ရွာမှာ အလုပ် သွားလုပ်ဖို့ ဆိပ်ကမ်းဆီမှာ လူတွေ အစုလိုက် အပြုံလိုက်၊
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာ ကံကို ကိုးရင်း မျောနေတဲ့ လှေတွေ အပုံကြီး။
မျက်လုံးပိတ်ထားရင်း ရှေ့ကို တစ်လှမ်းတိုး။ ပြန်မလာဘူးလို့တော့ အာမ မခံကြ။
အရိပ်မည်းကြီးကတော့ သူ့ဆံပင်မွှေးတွေ ဆွဲနှုတ်နေ၊ လို့။
ဒါပေတဲ့ ၊ ဘုရင်တွေ ဘာ့ကြောင့် ဒီလောက်များနေရတာလဲ။
တရားမဝင်လုပ်ငန်းဘုရင် - လိမ်လည်ညာဝါးဘုရင် - ရိုက်နှက်လုယက်ဘုရင်
ရာဇပလ္လင်မရှိတဲ့ဘုရင်၊ အလတ်စားဘုရင်၊ ဘုရင်သေးသေးကလေး…
အနိုင့်အထက်ပြုသူတွေ အချင်းချင်း အဖွဲ့ကျ။ သင်းတို့မျက်နှာတွေက မြင်းတွေလို၊ ကျွဲတွေလို။
တရားဥပဒေဆိုတာ ပျက်လုံးတစ်ခုပဲ။ တစ်ခါတစ်လေတော့ ဟုတ်ပါ့။ တစ်ခါတစ်လေတော့
လူတွေအများကြီးလျှောက်ရမယ့် လမ်းမှာ လူတစ်ယောက် လျှောက်နေပုံက အုံနဲ့ ကျင်းနဲ့၊ လို။
အရိပ်မည်းကြီးကတော့ သူ့ပေတံ ပြန်သိမ်း၊ လို့။
ငါ့ဘာသာ ငါ မေး၊ ဒီတော့၊ ပန်းပေါ့။
အရိပ်မည်းကြီးကတော့ သူ့ကျောဖက်ကို အသာကွေးလိုက်တော့၊ မေးခွန်းပြ သင်္ကေတလို။
ဒါ ပါ ပဲ။ ငါ၊ အိမ်ပြန်တော့မယ်။
ကျန်နေသေးတဲ့ ဗလာစာရွက်တွေနဲ့၊ အတူတူ။ စာရွက်တွေက အသစ်စက်စက်တွေ
ရင်ထဲအသည်းထဲမှာကလည်း မျှော်လင့်ချက် ခပ်မှိန်မှိန် တောက်တုန်း။
တစ်ခါတစ်လေတော့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် တောက်လောင်နေတာများ၊ ဆောက်တည်ရာမရသလို
စိတ်ဓာတ်ကတော့ ငါ့ကိုယ်ခန္ဓာဆီက သုတ်ခြေတင်ထွက်ပြေး၊ ပေါ့။
ရေတွက်ကြည့်မယ်ရယ်လို့ ငါ့ကိုယ်ထဲက ကလီစာတွေ၊ အသည်းတွေ ဆွဲထုတ်
စစ်ဆေးကြည့်မယ်ရယ်လို့ သွေးတစ်စက် ဖောက်ထုတ်
ငါ ကိုယ်ထဲမှာက၊ ပညာရှင် ပညာတတ်တစ်ယောက်၊ လယ်သမားတစ်ယောက်၊
စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်၊ အစိုးရအမှုထမ်းတစ်ယောက်၊ လူရွှင်တော်တစ်ယောက်၊
ဗုဒ္ဓဝါဒီတစ်ယောက်နဲ့ တစ္ဆေတစ်ကောင်၊ အားလုံးဟာ နွယ်ငင်ယှက်ပတ် ဆက်စပ်နေကြ၊
တစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကို ဒုက္ခရောက်အောင် လုပ်နေကြ။
လုပ်ဆို၊ မျက်နှာဖုံးတွေကို ခွာလို့မှ မလွယ်ပဲ။
ခုချက်ချင်း ခွာကြစေ။ ထပ်ပြီး ကြာမနေကြနဲ့တော့။
မင်းက ညာနေတာ၊ ကိုး။ သိပ်ကြာကြာ ညာနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
တော်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သောက်သုံးမကျတာပဲဖြစ်ဖြစ်။ နှစ်ခုလုံးမှာ အကန့်အသတ်တော့ ရှိတာချည်းပဲ။
တစ်ခုခုတော့ မှားနေတယ်.။ အဲဒါက ငါ့ကို စိတ်လှုပ်ရှားလာစေတယ်။
ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့ အစာကို မျိုချလိုက်တာ သိပ်မြန်သွားတယ်။ အစိမ်းသက်သက်ချည်း၊
မသန့်မရှင်း။ ဆိုးတာက၊ ငါတို့ရဲ့ မာန်မာနတွေကြောင့်၊ အစာမကြေလောက်ဘူး။
မသိစိတ်က သိလိုက်တဲ့ အမှန်တရားက - လူတွေဟာ အဆိပ်ခတ်ခံရတာကို ပျော်နေတာ။
ကြာလှပြီပဲ၊ ရောဂါဘယတွေ၊ လမ်းလွဲနေတာတွေဟာ အသာလှဲပြီး စောင့်နေခဲ့ကြတာ။
ငါတို့လည်း သိပါသော်ကော။ ဒါပေတဲ့၊ ဆေးမှ မရှိပဲ။
မပြောတတ်ဘူး။ ကျိန်စာတိုက်ထားတဲ့ ဆေးလုံးပဲ ဖြစ်မယ်။
ဒါပေတဲ့၊ ကျိန်စာတိုက်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေက ဒါကလေးကို သုံးရင် သွားဖြဲပြနေမှာ။
မပြောတတ်ဘူး။ နွားတွေ ဝါးတဲ့ မြက်ခြောက်ဆေးလုံးဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာ
ဒီတော့၊ လူကြီးမင်းများ အစ်မကြီးများခင်ဗျား။ စက် တစ်ခုဆီမှာ ဆုတောင်းကြပါ ၄။
(၄ဒီနေရာမှာ ကဗျာဆရာက လူတွေအနေနဲ့ ရုပ်တုတော်တွေ၊ တန်ခိုးရှင်တွေ…စတာတွေအစား စက်/စက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို တောင်းစရာလို့ သဘောထားဖို့ ရေးပြီး သရော်တာပါ။)
ငှက်ကလေးတွေ သီချင်းဆိုတာမျိုးတော့ မလုပ်ကြပါနဲ့တော့။
လူတွေ ငတ်နေကြတုန်း၊ ဖျားနာနေကြတုန်း၊ဟန်လုပ်ပြီး ဘာမျှ မဖြစ်သလိုနဲ့ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်
တခြားလူတွေအတွက် ခါးကုန်းပြီး လုပ်ပေးနေရတဲ့ လူတွေက အစာစားတော့ မတ်တပ်ရပ်တယ်။
ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး ဆိုတာက၊ တကယ်လား၊ ဟန်လုပ်ပြောနေကြတာလား။
ငါတို့သွေးက အဆိပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင် သွေးကို လဲပြီး အစားထိုးလို့ ရပါ့မလား။
ဘယ်သူ့ကိုမျှ ချစ်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုတာကတော့ ကြောက်စရာပဲ။
ဒါပေတဲ့၊ တကယ်လို့ မုန်းစရာလူ မရှိတော့ဘူးဆိုရင် ပိုပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းသေး။
တစ်နေ့ပြီး တစ်နေ့၊ ငါတို့ဟာ ရင်ထဲအသည်းထဲက၊ အသွေးအသားထဲက ကဗျာတွေ ရေးခဲ့ကြ။
ငါတို့ဟာ လိုအပ်တယ် လို့၊ အလိုအပ်ခံချင်နေကြတာလား။ ဘယ်သူ့ဆီကတဲ့လဲ။
ငါတုိ့ဟာ တခြားတစ်ယောက်ယောက်ကို မယုံတာလည်း ဖြစ်မယ်။
တခြားတစ်ယောက်ယောက်က ငါတို့ကို မယုံတာလည်း ဖြစ်မယ်။
ဒါပေတဲ့၊ လူသားဆိုတာ ဘယ်လိုဘယ်ပုံဆိုတာကိုတော့ ယုံတယ်။
လက်လျှော့လိုက်သလိုမျိုးနဲ့ လက်ပိုက်ပြီးတော့ တော့ မနေပါနဲ့.။
မင်းတို့ မျက်နှာကို မကြည့်ဘဲ၊ အခက်အခဲကို အတူတကွ ကျော်လွှားရမှာက ဝမ်းနည်း ကြေကွဲစရာ။
ကောင်းတယ်ဆိုတာက မကောင်းဘူးဆိုတာထက် သာတယ်။ ဒီလိုဆို၊ မကောင်းတာက
ဒီလိုဆိုလိုက်ရပေတဲ့လည်း၊ တိုင်းပြည်ကတော့ ရင်ထဲ အသည်းထဲမှာပဲ
ကဗျာဟာ ရှင်သန်နေတုန်း။ဒါပေတဲ့ လူတွေရော ရှင်သန်နေကြပါ့မလား။
သူတို့တစ်တွေဟာ ငါ၊ ပဲ။ ဒီတော့၊ ငါက ရှိနေတယ်။
ဘယ်လောက်ပဲ ခက်ခဲ၊ ခက်ခဲ။ ဘယ်လောက်ပဲ ပင်ပန်း၊ ပင်ပန်း။
“အရေပြားရှိနေတော့ အမွေးပေါက်မှာပါ။ အမြစ်တွေရှိနေတော့ အပင်ပေါက်မှာပါ” ၅။
(၅အစဉ်အလာ ဗီယက်နမ်ကဗျာတစ်ပုဒ်မှ စာကြောင်း တစ်ကြောင်း ဖြစ်သည်။)
ဝေးဝေးက လှမ်းကြည့်နေလိုက်မိတဲ့ ငါ့တိုင်းပြည် (မြင်...